VaBahamas Vanopa yavo Yechipiri Yechokwadi Junkanoo Zhizha Mutambo 2
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » VaBahamas Vanopa yavo Yechipiri Yechokwadi Junkanoo Zhizha Mutambo 2
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Bahamas Junaknoo Mutambo weZhizha
Bazi reBahamas rezveKushanya neAviation riri kusimudzira kuitisa yayo 2nd Virtual Junkanoo Zhizha Mutambo (JSF) ye3 akateedzana Mugovera, Nyamavhuvhu 14, 21 uye 28, 2021.
Junkanoo Zhizha Mutambo ndeimwe yeiyo Bahamas Ministry of Tourism's yekutanga zviitiko zvinoitika gore rega.
Mutambo wakatanga mu2015 uye wakura zvakanyanya uye wawana mukurumbira mukuru.
Nekuda kwekuzivikanwa kwayo, iyo Ministry of Tourism iri kubata chiitiko ichi chaizvo icho chinovimbisa kuti chinongonakidzawo.
Mhemberero chaiyo ichaonekwa pa TourismTodayBahamas Facebook peji uye icharatidza zvese zvinhu zveBahamian, tsika, tsika, zvikafu zveBahamian, nehunyanzvi nenhoroondo yeJunkanoo. Ichi chiitiko chaicho chinotendera Bazi rezveKushanya kuti rirambe richiedza mukuchengetedza munhu wese, richichengetedza tsika yaro yetsika.
Junkanoo Zhizha Mutambo ndeimwe yeiyo Ministry of Tourism zviitiko zvekutanga zvinoitika gore rega. Kubva payakatanga muna 2015, mutambo uyu wakura zvakanyanya uye wawana mukurumbira mukuru. Mune vein iyo, iyo Ministry of Tourism uye Aviation inokoka munhu wese kuti apinde mumhemberero iyi sezvo ichiratidza izvo zviri zvechokwadi Bahamian.
Joinha mune ino chaiyo parade yetop-notch Bahamian tarenda, inoratidzira pakati pevamwe, Ira Storr uye Spank Band, Geno D., Lady E, naVeronica Bishop. Chiitiko ichi chichaitirwawo na Bahamian vaimbi nevaimbi vanyori Dyson naWendy Knight uye vachazoguma nehupenyu Junkanoo kuita neyaka-nyeredzi junkanoo bhendi.
Uyu Mutambo unotarisirwa kwazvo, kunyangwe uri wechokwadi, unovimbisa kuvaraidza nekuita uye unoratidzira zvikamu zvetsika yeBahamian, senge kugona kwevanhu vayo, mumhanzi nekutamba, nyaya, chikafu cheBahamian, uye musanganiswa wezvinwiwa zvemuno.